Kuyini ngempela ukuxhumana phakathi kokuba umuntu enze umsebenzi kanye nokufuna iqiniso? Ukwenza komuntu umsebenzi kunaliphi iqhaza ekutholeni insindiso?
Umuntu angazithoba kanjani futhi ezwe umsebenzi kaNkulunkulu wezinsuku zokugcina ukuze athole insindiso?
Kungani ukwamukela insindiso nokupheleliswa uNkulunkulu kudinga ukubekezelela ubunzima obuningi kangaka?
Ngonjani umuntu othembekile? Kungani uNkulunkulu ethanda abantu abathembekile?